एमालेका महासचिव भन्छन : ओलीलाई पार्टी र नाम दिन सक्दैनौं ! – yuwa Awaj
पुष ९, २०७७ बिहिबार 0
काठमाडौं : साढे दुई वर्षअघि एकी’कृत नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टी (नेकपा) मंगलबारबाट स्प’ष्ट रूपमा दुई टुक्रा भएको छ। नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर व’रिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाल पक्षले संस्थापन दा’बी गर्दै नि’र्वाचन आयोग पुगेका छन्। यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी ल’डाइँमा प्रवेश गरेको हो।व’रिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वि’वादअगाडिको के’न्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताए।
जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ। वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ। विवा’दअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधि’कारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक द’लसम्बन्धी ऐनको द’फा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ।
वि’वाद हुनुअगाडिको के’न्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ। कुनै द्वि’विधा हुनुपर्ने कारण छैन।’ केन्द्रीय समितिमा ओलीको बहुमत छैन। पार्टी फु’टाउनलाई केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ।
ओलीलाई ४० प्रतिशत पु’र्याउन पनि कठिन हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा ओली पार्टी भित्र अप्ठे’रो स्थितिमा छन्। नेकपाबाट बाहिरिएका ओली पक्षधर पूर्वएमाले बु’त्याउने प्रचार गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आ’योगमा उक्त दल पुन द’र्ता भइसकेको छ। ओलीलाई नेकपा एमाले द’र्ताका लागि पनि कानुनी बाटो बन्द छ।
नेकपा विभाजित भएको ख’ण्डमा के पूर्व नेकपा एमालेले पुनः राजनीतिक अस्तित्व लिन्छ या लिँदैन यो पनि कौ’तूहलको विषय बनेको छ। नेकपा एमाले नामको पार्टी गत भदौ ३ गते निर्वाचन आयोगमा द’र्ता भएर छुट्टै पार्टीकोरुपमा उभिइसकेको छ। एमाले नि’र्वाचन आयोगमा द’र्ता हुँदा नेकपा भित्र ठुलो तरंग नै मच्चिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा एमाले द’र्ता भएको नेकपाका नेताहरूले आ’रोप लगाएका थिए।
तर यता निर्वाचन आयोगमा द’र्ता भएको नेकपा एमालेका महासचिव मनिषकुमार उपाध्यायले भने एमाले कसैको पनि निर्देशनमा द’र्ता नभएको प्रस्ट्या’एका थिए। महासचिव उपाध्यायले स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको सि’द्धान्त र निष्ठा प्रति समर्पित युवाहरूले स्वर्त’स्फुर्तरुपमा दर्ता भएको बताएका थिए। एमाले अब भण्डारीको आदर्शबाट प्रेरित रहेर देश विकासका लागि राजनीतिमा होमिने उनको भनाइ थियो।
महासचिव उपाध्यायले नेकपा भित्र देखिएको अहिलेको वि’वादमा आफूहरूलाई तान्नु दुर्भा’ग्य भएको बताएका छन्। उनले नेकपा एक’जुट रहे नै देशको हित हुने बताएका थिए। उनले संसद् वि’घटन असंवैधानिक र ग’लत कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले
दुई तिहाइ मत र जनताको अपमा’न भएको टि’प्पणी गरे। अब एमाले नाम हामीलाई चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीबाट
प्रस्ताव आए के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव उपाध्यायले भने, ‘पार्टी र नाम दिन सक्दैनौं, पद भने दिन सकिन्छ तर के पद दिने भन्ने विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गरेर मात्र सम्भव हुन्छ।’
Prevछ कार्यालय प्रमुखसहित ६१ कर्मचारी छड्केमा
Nextआजको राशिफल : वि.सं. २०७७ पुस १३ गते साेमवार ।। श्री पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन
ओलीलाई पदमा बस्न नैतिकताले दिँदैन, अब अर्को आ’न्दोलन हुन्छ – उपेन्द्र यादव…हेर्नुहोस् ।